Farmaajo oo Cagta Saaray Wadadii uu Ku Fashilmay Xasan Sheekh (Akhriso Warbixinta) | Allbanaadir
Farmaajo oo Cagta Saaray Wadadii uu Ku Fashilmay Xasan Sheekh (Akhriso Warbixinta)
Madaxweynihii hore mudane Xasan Shiikh Maxamuud waxaa lagu eedeeyaa inuu safarradiisu tirada ka bateen. oo uu ahaa madaxwayne shirkasta ka qeyb gala jiray iyadoo Gudoomiyaha baarlamaanka aan loo diri jirin ama wasiir.
Dadka soomaaliyeed waxay islahaayeen madaxweyne Farmaajo wuxuu waqti badan galin doonaa safarada gudaha iyo ka war qabka dadka badan ee ku nool caasimada inuu cisbilaada booqdo goobaha wax barashada. Meelaha ay ka socoto shaqada adeega bulshada.
Shacabku waxay sugayeen lama hayo 10kii bilood ee uu madaxweyne Farmaajo xilka hayo bilkasta 2 jeer ama sadax ayuu safar dibada ah aadaa.
Inaan Falanqeeyo oo dadka xaqiiqda Farta ugu fiiqo waa wax sax ah :
waa in aan is waydiinaa wadamada dariska nala ah ee xaalad naga wanaagsen ku jira madaxweyne yaashoodu sidaa uma safraan shirkasta iskama tagaan
Maxaa ka qaldan madaxweyna yaasheena intii dawlada Faderaalka caalamku aqoonsadey. 2012 ilaa maanta 2017.
Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ay magac ahaan qaadatay hanan Cusub oo Federaal ah balse wali ma jiraan Xeerar iyo hab raac rasmi ah oo la xiriira awoodaha Federaalka ee Dhinac kasta marka laga hadlayo Dowlada Federaalka ah ama Dowladaha Xubnaha ka ah. Wali waxaan ku jirnaa xaalad dib u heshiin.
Markaa safarada madaxweyne Farmaajo maxay ka badali karaan xaalada siyaasadeed iyo mida colaadeed hadii madaxweynihii wax waqtiya u hayay in la dhiso wadan caafimaad kaba oo uu matali karo Marka uu shirka caalamka tago.
Shacanka soomaaliyeed wax weyn ay ka filanayeen markii madaxweyne Farmaajo xilka ku guulaystay.
Sida mideynta bulshada Soomaaliyeed, xoojinta Geeddi socodka dib u heshiisiinta sameynta ciidamo isku dhafan sameynta lacagta Somaliyeed oo cusub hawlahaa oo dhan. ? Waa waxa ay shacabku sugayeen.
Markaa Sow ma oran karno. Mashruucii madaxweyne Farmaajo uu balan qaadey wuxuu bilaabi doona 2018. Inta ka horeysa caalamka ayuu isbarayaa.
Aqoon-yahan ka Faallooda Arimaha Somalia,